Thwebula Recover My Files 5.2.1.1964 – Vessoft
Thwebula Recover My Files
Fumana Amafayela My – ithuluzi elinamandla ukuze alulame amafayela kusulwe noma ezilahlekile. Fumana Imenenja yefayela kwenza ukuba alulame amafayela owakhipha kusuka kubhasikidi, walahlekelwa ngenxa ukushayela kwebinza, asuswe igciwane noma walahlekelwa ngenxa ukwehluleka in the system. Isofthiwe usebenta nelicembu ifayela izinhlelo popular futhi ikuvumela ukuba abuyisele amafayela kuma ulwazi ezahlukene yezinkampani. Fumana Imenenja yefayela ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Lokubuyisela of amafayela isusiwe kubhasikidi
Lokubuyisela of amafayela elahlekile ngenxa ukufomatha disc
Lokubuyisela of amafayela asuswe igciwane
Amazwana on Recover My Files:
Recover My Files Ahlobene software:
Amafayela Isofthiwe Ukukopisha ukuhambisa amafayela ngokushesha. Isakhiwo software kuhlanganisa izici eziningi ezahlukene ukuthi ahlinzeke lula esiphezulu we ukukopisha.
Amafayela Ithuluzi popular ukuphatha amafayela ezihlukahlukene uhlelo. Isofthiwe isekela plugins eziningi awusizo futhi Izinsiza eyakhelwe-in.
English, Français, Español, Deutsch... Dropbox 20.4.19
English, Українська, Français, Español... Effector saver 3.3.2
Amafayela Isofthiwe yakhelwe isipele yolwazi we 1c: software Enterprise, amafayela siqu noma SQL yolwazi.
Amafayela Isofthiwe zokudlulisela fast amafayela ezinhlobo noma ezinobukhulu obuhlukahlukene. Isofthiwe isekela exchange of idatha phakathi kumadivayisi multiple kanye computer kanyekanye.
Amafayela Ithuluzi ukugcina idatha ku-USB ifu. Isofthiwe kwenza ukuba ulayishe amafayela esilondolozini efwini ahlinzeke ukufinyelela idatha kulayishiwe kusuka kumadivayisi ezahlukene.
Amafayela Isofthiwe ukuze alulame idatha elahlekile takhiwo letehlukene kusuka kukhompyutha futhi ezixhunywe kulo abathwali yangaphandle.
EaseUS Todo PCTrans 9 Free futhi Pro